Manan-tsaina Key rafitra fitantanana A-180E Miaraka amin'ny USB Co ...
Masinina fanalahidy ho an'ny serivisy ho an'ny Office & Hotel miaraka amin'ny ID famantarana sy ny dian-tanan-tànana
Ny fanekena ny endrika mandroso sy ny fanamarinana ny mari-pahaizana momba ny rantsantanana biolojika mba hanomezanao fahazoan-dàlana tokana sy avo roa heny
Landwell manan-danja boaty fanalahidy ambony kabinetra rafitra fitantanana fiarovana
Ny kabinetra fitantanana Landewell Intelligent Key Management miaraka amin'ny Lockers dia natao hitahirizana ny lakile, fitaovana na fitaovana azo antoka ary hitantanana azy ireo amin'ny fomba fanaraha-maso sy alàlana. Ireo kabine marani-tsaina ireo dia nampifangaro ireo kabinetra sy akanjo fanalahidy. Ireo kabinetra dia azo sokafana amin'ny alàlan'ny karatra akaiky akaiky RFID (transponder), na / ary misy kaody PIN, na / ary misy ny famantarana ny dian-tànana. Ireo mpampiasa dia tsy mahay manokatra afa-tsy ireo fanidiana lamba ireo ary tsy mahazo afa-tsy ireo lakileny izay nanomezana alalana azy ireo.
• Ny teknolojia mandroso RFID malaza dia mahatonga ny rafitra ho mandeha ho azy tanteraka
• Varavarana PMMA na varavarana vy tsy misy atahorana mba hilamina kokoa ny fanalahidy
• Ireo mpampiasa nahazo alalana ihany no afaka miditra amin'ny lakile voatendry amin'ny fotoana iray
• Voafehy ny lakile amin'ny alàlan'ny real-time sy ny logiciel
• Mifangaro amin'ny ankamaroan'ny rafitra fanaraha-maso ny fidirana
Ny rafitry ny fitantanana manan-tsaina manan-tsaina Landewell dia mandray ny teknolojia RFID maoderina hanampy anao handamina lakile isan'andro sy zava-tsarobidy.
• Teknolojia mandroso RFID malaza, mahatonga ny rafitra ho mandeha ho azy tanteraka
• Ireo mpampiasa nahazo alalana ihany no afaka miditra amin'ny lakile voatendry amin'ny fotoana sasany
• Voafehy ny lakile amin'ny alàlan'ny realtime sy ny lozisialy
i-keybox-8 boaty kely misy rafitra fitantanana sy lakile
Fanamarinana Landewell CE fitantanana lehibe Ny kabinetra dia mandray ny teknolojia RFID hahatonga ny lakilanao sy ny fanananao ho azo antoka kokoa hampiasanao, ny vaovao dia voarakitra ho an'ny mpampiasa sy ny fananana tsirairay ary miteraka tatitra ho an'ny fananana sarobidy.
Landewell Commercial Key Management System Box dia mampiasa ny teknolojia RFID mora ampiasaina. raketo tsara ny fampiasana ny lakile (anarana, anarana fanalahidy, ora fiverenana sns.) tazomy ireo lakile izay ilainao indrindra, ary raiso amin'ny fotoana rehetra, na aiza na aiza.
• Varavarana PMMA na varavarana vy tsy misy atahorana mba hilamina kokoa ny lakile
• Tafiditra amin'ny ankamaroan'ny rafitra fanaraha-maso ny fidirana
Landewell Wall Mounted Key Safe Management System Box dia afaka miantoka ny fiarovana ny fananan'ny mpampiasa, izay tsy azo ampiasaina raha tsy misy alalana. Ny asa rehetra dia voarakitra an-tsoratra ary mandray andraikitra amin'ny fiarovana ny fananana ny mpampiasa.
Kabinetra manan-danja Landewell Miaraka amin'ny Rafitra fitantanana nomerika avy amin'ny safidy fitehirizana tsotra azo antoka amin'ny fifehezana ny haavon'ny orinasa fitaovana lafo vidy na mora tohina, dia manome fomba intuitive sy mahery hitantanana, hanara-maso ary hitatitra ny fampiasana fananana manan-danja indrindra.
Landewell Key Cabinet With Combination Management System dia azo vidiana sy namboarina mba hifanaraka amin'ny fampiharana rehetra. Izy io dia mampiasa vahaolana mpisava lalana hitantanana ireo ampahany manan-danja indrindra amin'ny fikambanana rehetra.
Landewell Electronic Key Control Cabinet dia afaka manara-maso tsara ny satan'ny lakile rehetra mba hahafahan'ny lakile rehetra
tantano am-pahendrena. Tena fomba tsara hanampiana anao hamaha ireo olana lehibe amin'ny fitantanana izany. mampihena ny risika sy ny vidin'ny fitantanana, manatsara ny fahombiazan'ny asa.
Ny rafitra fitantanana manan-tsaina manan-tsaina Landewell dia mandray ny teknolojia RFID mandroso hanampiana anao handamina lakile isan'andro sy fananana sarobidy.
Kabinetra lakile azo mihidy, Kabinetra fitantanana lehibe, Rafitra fitantanana boaty kely sy lakile, Ny boaty ho an'ny fanalahidy fanaraha-maso, Kabinetra fitehirizana lehibe, Vata fanalahidy mihantona,